घरभाडा छुट बारे अर्थमन्त्रीले कुरा फेरी, कसको पर्यो दवाव – Hamrosandesh.com
घरभाडा छुट बारे अर्थमन्त्रीले कुरा फेरी, कसको पर्यो दवाव
सरकारले यसअघि बहालमा बस्नेको एक महिनाको भाडा नलिन आग्रह गरेको थियो । यो निर्णयको कार्यान्वायनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहलाई समेत निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रीपरिषद्को बैठकपछि दिएको जानकारीमा अर्थमन्त्रीले कस्ताले घरभाडा छुट पाउँने भन्ने कुनै कुरा खुलाएका थिएनन् । तर डेढ महिनापछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कुरा फेरेका छन् । उनले असंगठित मजदुरलाई मात्र घरभाडा छुट दिन भनेको उल्लेख गर्न थालेका छन् ।
घरभाडामा बस्ने भनेका सबैभन्दा ठूलो संख्यामा विद्यार्थी छन् । उनीहरुको घरभाडा के हुन्छ ? अझ उनीहरुले त बहालमा बसेको कोठा छोडेर आफ्नो घरमा बस्दै आएका छन् । कतिपय फेरी फर्किन सक्ने नसक्ने कुनै टुंगो छैन । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरुलेपछि सम्म नै घरभाडा तिर्नुपर्ने वा के भन्ने केही खुलाइएको छैन ।
अर्थमन्त्री मन्त्री युवराज खतिवडाले पत्रकार सम्मेनमा भने,‘ असंगठित मजदुरलाई एक महिनाको घर भाडा मिनाहा गर्न भनेका हौं, पैसा हुने र तिर्न सक्नेहरुलाई यो भनेका छैनौं, घरधनीलाई न्युनतम आह्वान गरेका हौं, एक महिनाको घरभाडा पनि छुट दिन फेरि आग्रह गर्दछौं ।’ सरकारले माध्यमिक तहसम्मका बिद्यालयलाई आवास बाहेकको अन्य शुल्क नलिन पुनः आग्रह गरेको छ।